China Single Screw Extruder emepụta na ngwaahịa | GZSJ
Single ịghasa Extruder
SJ usoro Single ịghasa Extruder ka nakweere ugboro akara na ike n'ụzọ dị irè belata ike oriri nke nnyefe usoro via kpọmkwem njikọ ụzọ nke moto na Mbelata gearbox. Scghasa eji iche iche na igwekota isi ụzọ na ike ike shiee edinam nke ihe, mma plasticizing mmetụta. Nke a extruder bụ na ezi kwụsie ike na ala ike oriri.
Single ịghasa Extruder: Nkọwa
Ngwa: Extrusion maka Corrugated Pipe
Plastic Ahazi: Pee, Eyi, ịkwanyere, PA, Eva
Mmepụta (KG / H): 0-100 kg / h
Rewghasa Design: Single - rewghasa
Ihe rewgha: 38 CrMoAIA
Rewghasa dayameta: 30mm ---- 90mm
Gbanye L / D: 28: 1 ma ọ bụ 30: 1
Rewghasa Speed ​​(rpm): 0-75 rpm
Ebe nke Orihin: Zhejiang, China
Aha Ahịa: GZSJ
Voltaji: 380V, 440 V ma ọ bụ ahaziri
Ike: 4KW --- 55KW
Arọ: 800 KG --- 1500KG
Mgbe-ahịa Service: Online Nkwado
Isi Ihe Na-ere: Dị mfe ịrụ ọrụ
Ihe: Iron Steel
Egwuregwu Nyocha Ngwaọrụ: Dị
1: Kwesịrị ekwesị maka ihe dị iche iche polyolefin: PE / PP / PVA / PA / EVA na plastik ndị ọzọ. SJ otu ịghasa extruder adopts elu mmadụ-igwe interface njikwa usoro ịdabere na akpaka akara nke dum akara.
2: Ezigbo usoro nchịkwa okpomọkụ iji hụ na nkwụsi ike nke usoro mmepụta. Integrated imewe nke ike ikuku jụrụ na ike nri uzo ana achi achi thyvenness na kwụsie ike nke manufacuring usoro.
3: High-arụmọrụ ụgbọala usoro; Weara na mfe iji nọgide na-enwe.
15-20 n'arọ / awa
20-35 n'arọ / awa
30-45 n'arọ / awa
45-65 n'arọ / awa
60-90 n'arọ / awa
70-150 n'arọ / awa
1: Plastic film mbukota mbụ
2: Osisi igbe mbukota
Okwu mentkwụ :gwọ: 30% nkwụnye ego site T / T tupu oge,, na 70% itule ugwo tupu mbupu.
A: Na mbụ ọ bụ ụbọchị 20-45 ka ị natachara nkwụnye ego ahụ. Oge pụrụiche dị mkpa iji kwalite ụbọchị nnyefe ọhụụ.
Q: Kedu ka ị si ekwu okwu maka ndị ahịa?
A: Biko nye ozi ndị a, yabụ anyị nwere ike inye gị ọnụahịa na ndụmọdụ anyị dị ka onye nrụpụta:
1. pipedị ọkpọkọ ịchọrọ ịmịpụta.
2. Pipe dayameta.
3. Akụrụngwa ihe na ụdị ya
Ọ bụrụ na ị nwere ike izipu anyị foto nke ihe nlele gị, ọ ga-enwe ekele dị ukwuu.
A: Paykwụ <gwọ <= 1000USD, 100% n'ọdịnihu. Kwụ >gwọ> = 1000USD, 30% T / T tupu, itule tupu shippment. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọzọ, biko nwee ike ịkpọtụrụ anyị.
Nke gara aga: ọkpọkọ mmiri n'okpuru nsị
Osote: High Speed ​​akpụ Machine / Corrugator
High Speed ​​akpụ Machine / Corrugator
Intermediate Speed ​​akpụ Machine